शुरु भयो काठमाण्डौमा लोडसेडिङ, बिजुली जानुको कारण यस्तो:: Naya Nepal
शुरु भयो काठमाण्डौमा लोडसेडिङ, बिजुली जानुको कारण यस्तो
पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्‍न भागमा बिजुली जाने क्रम बढिरहेको छ । लामो समयसम्म विद्युत नहुँदा कतिपय सर्वसाधारणलाई पुनः लोडसेडिङ्‍को झल्को पनि गराउने गरेको छ । तर, यसरी पटक पटक बत्ती गइरहेको कारण भने बेग्लै छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकासहित देशका विभिन्‍न भागमा मर्मतको काम भइरहँदा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो । “अहिलेको समय भनेको मर्मत(सम्भार गर्ने हो । चाडपर्वका बेलामा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नहोस् भनेर विगत वर्षमा पनि यस्तै मर्मत गरिन्थ्यो । अहिले पनि त्यही गरिएको हो,” प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले भने ।
यसलाई लोडसेडिङ भएको भनेर नसोच्‍न पनि उनले आग्रह गरे । “यो लोडसेडिङ कदापि होइन, मर्मत गर्दा यस्तो भएको हो ।” उनले मर्मतका क्रममा एक घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् अवरुद्ध हुने देखिए त्यसमा सूचना दिन प्राधिकरण प्रमुखको निर्देशन रहेको उनले बताए । साथै उनले लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने भए सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको पनि बताए ।
अहिले विद्युतको माग र आपूर्ति समान रुपमा रहेको भन्दै लोडसेडिङ हुने भन्ने कुनै सम्भावना नै नरहेको पनि उनले दाबी गरे । प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने र विद्युत्‌को पोल फेर्ने कामसहित अन्य ममर्तको काम देशैभर भइरहेको जनाएको छ ।
कहिलेसम्म मारिनुपर्ने छोरीहरू ?
महिला हिंसाभित्रको सबैभन्दा क्रूर, अमानवीय र कारुणिक दृश्य हो बलात्कार। यो शब्दले नै जोकोही छोरीचेली र महिलाको आङ सिरिंग हुन्छ। त्यसमाथि दिनहुँजसो हुने यस्ता घटनाको समाचार सुन्नु र पढ्नुपर्दा झनै बालिका कहींकतै सुरक्षित छैनन् भन्ने वास्तविकता प्रकट हुन्छ।
असोज ७ गते बुधबार १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भयो। बझाङ मष्टा गाउँपालिका– २ खिकालाकी सम्झना बुधबार साँझ गोठमा गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न हिँडेकी थिइन्। तर उनी गाउँकै शिवमन्दिरमा मृत फेला परिन्। उनको बलात्कार र हत्या राजेन्द्र बोहोराले गरेका थिए। अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा छन्।
धनुषाको धनौजी गाउँपालिका– १ लखौरीकी १७ वर्षीया अमिरकाकुमारी दासको बलात्कारपछि हत्या भयो। उनको शव रेल्वे ट्याकनजिकैको खाल्डोको पानीमा फालिएको अवस्थामा भेटियो। उनलाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्नेलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन।
भदौ २९ गते सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ७ कि १७ वर्षीया संगीता मण्डल सामूहिक बलात्कृत भइन्। खेतमा घाँस काट्न गएका बेलामा दुई युवाले उनलाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। त्यसपछि गाउँमै पञ्च बसेर घटना मिलाउन उल्टो किशोरीलाई धम्की दिइयो। प्रहरीमा जाहेरी दिन जान बन्देज लगाइयो। साथै बलात्कार गर्नेबाट २५–२५ हजार क्षतिपूर्ति दिने सहमति गराए। त्यही दिन संगीताको घरको बलोमा सलको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो।
यी त केही दृष्टान्त मात्रै हुन्। यस्ता घटना हाम्रो समाजमा दिनहुँ भइरहेका छन्। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ– हाम्रा छोरीचेली घरपरिवार, समाज, मठमन्दिर, सार्वजनिक ठाउँ कहींकतै सुरक्षित छैनन्। आखिर कहिलेसम्म छोरी असुरक्षित भएर बाँचिरहनुपर्ने हो ? के छोरीचेली डरत्रासविनै समाजमा हिँडडुल गर्ने अधिकार राख्दैनन् ?
२०७५ देखि अहिलेसम्म १५ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। हत्या हुनेमा कञ्चनपुर भीमदत्तकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त, जनकपुर उपमहानगरपालिका– २१ कि ११ वर्षीया कञ्चनकुमारी पञ्जियार, रूपन्देही देवदह– ११ की १३ वर्षीया अँगिरा पासी, इलाम सूर्योदय नगरपालिकाकी १७ वर्षीया आकृति राई, मोरङकी १० वर्षीया रूपमती दास, धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा रसाइली, महोत्तरी औरहीकी आठमहिने सोनाली चौधरी, पोखराकी ८ वर्षीया श्रेसा सुनार, बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विक, बारा जितपुरकी १० वर्षीया अनिता यादव, बाराको १७ स्थित जितपुर सिमराको जंगलमा भेटिएकी १४ वर्षीया बालिका (नाम नखुलेको), धनुषा धनौजीकी १७ वर्षीया अमिरकाकुमारी दास, कैलाली गौरीगंगा ११ की २० वर्षीया माया विक, धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका– ३ कि १६ वर्षीया अञ्जनीकुमारी सदा, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ७ कि १७ वर्षीया संगीता मण्डल। यिनीहरू सबैको बलात्कारपछि हत्या भएको हो।
देशमा बलात्कारसम्बन्धी कानुन नभएको होइन, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। यसकै फाइदा उठाउँदै अहिले पनि पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन्, पैसा र पावरको धाक र माथ देखाएर मलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने मैमक्त व्यवहार देखाइरहेकै छन्। राजनीतिक दल नै पीडकका संरक्षक भएका छन्। उनीहरू प्रहरी प्रशासनकै सामुन्ने घटना दबाउन विनाकुनै हिच्किचाहट पैसाको बार्गेनिङ गर्छन्। अनि पीडितले नमाने मार्नेसम्मको धम्की दिन पछि पर्दैनन्। यस्तो दण्डहीनताले पछिल्ला दिनमा बलात्कार र हत्याका घटना झनै मौलाउँदै जानु पनि यसकै उपज हो। कानुनमा बलात्कार गर्नेलाई उमेरअनुसारको सजाय तोकिएको छ तर यो सजाय अपराधअनुसार निकै कम हो। हालको कानुनमा बलात्कारीलाई दस वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म, १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी भए १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म, १६ वर्र्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म र १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ। तर यो कानुन अपुग देखिइसक्यो। यो कानुन अब परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन। बलात्कारी र हत्यारालाई १०–१५ वर्षको कैद सजायले पुग्दैन; उसलाई अब मृत्युदण्डकै सजाय हुने गरी कानुन बनाउन आवश्यक छ।
देशमा सरकार, न्यायालय र प्रहरी प्रशासन छ, तर न्याय पीडितका पक्षमा छैन। निर्मला पन्त यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। हत्या भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, उनले त न्याय पाउन सकेकी छन्, न त उनका हत्यारालाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्न सकेको छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध वृद्धि भइरहनुमा राज्यको असंवेदनशीलता, न्यायालयमा पैसावालाकै हालीमुहाली र प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपनले भूमिका खेलेको छ।
महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी श्रेष्ठ अपराधीमा म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने माइन्डसेट र पावर अनि पैसाको पहुँच भएकाले यस्ता अपराध गर्न पीडकहरू नडराउने गरेको बताउँछिन्। बलात्कारको सिकार सानो उमेरका, आफ्नो आवाज बाहिर ल्याउन नसक्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर बालिका हुने गरेको उनको तर्क छ।
केही समयअघि मात्र एसिड आक्रमण गर्नेविरुद्ध सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जन गरेको छ। यसले एसिडपीडितलाई राहत दिएको छ। यो स्वागतयोग्य पक्ष हो तर कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउन आवश्यक छ। कानुनमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डकै सजाय हुने गरी कानुन बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। सरकारको घैंटोमा घाम लागोस् र यस्ता बलात्कारी र हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिने कानुन तर्जुमा गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि महिला अधिकारकर्मी र महिला सांसदले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरी निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ।